अनन्त उन्मुक्त बगाइजस्तै ’बाग्मती ब्लूज’
भावना परिष्कृत सुनुवा� -
’थकित पृथ्वी’ कथासंग्रह र ’विछोड अघिको रात’ कवितासंग्रह दुई कृतिमार्फत नेपाली साहित्य बगंैचामा फुल्न सफल विजय हितानको तेस्रो पुस्तकाकारको रुपमा ’बाग्मती ब्लूज’ कवितासंग्रह प्रकाशन भएको कुरा अत्यन्तै सुखदायी छ, स्वागतयोग्य छ । हामी थुप्रै नेपाली साहित्यानुरागिको निम्ति र सिंगो नेपाली साहित्यकाशको निम्ति पनि उनको प्रथम कविताकृति ’विछोड अघिको रात’ पढ्ने अवसर नजुरे पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा निरन्तर प्रकाशन भइरहेका फुटकर कविताहरुको अनुरागी हुँ म । त्यसो त, हितान कविता, कथाको अलावा नाटक, निबन्ध र अन्य विविध समसामयिक विषयमा लेख, रचना, सिर्जना गर्न पनि खप्पिस छन् । समयले उनको हातमा बन्दुक थमाइदिए पनि कलमको गति र शक्तिलाई सलामी ठोक्दै झुकेको हुनु पर्छ संगीनले पक्कै, साहित्यप्रतिको उनको तपस्याको अगाडि । कविको यिनै कलमी साधनाको फल मीठो स्वादले तृप्त पार्दै सकारात्मक विचार र सन्देश सम्प्रेषण गर्दै अवतरण भएको छ ’बाग्मती ब्लूज’को नामले ।
हितानको सिद्धहस्त कलमले ’बाग्मती ब्लूज’भित्र हामीलाई बचाउने पृथ्वीलाई हामीले नबचाए प्राणी मात्रको अस्तित्व बेरूप, कुरुप भइ संकटमा पर्ने चेतावनीको धावा बोलेको छ । कविताले पर्यावरण प्रेम र संरक्षणलाई जोड दिँदै सुन्दर, आनन्द प्रदायक, हराभरा पुष्पितपल्भित पृथ्वीको गुरुयोजना बुनेको छ । हितान आफैंमा एक साहित्य सर्जक मात्र नभएर वातावरणविद् हुन्, भूपू गोर्खा सैनिक हुन्, हामी सबैले देखेको जगत र भोगेको जीवनको अनुभूत गर्दै खारिएका परदेसी हुन् । त्यसैले त होला प्रवासको जुनै दूर बस्तीबाट उनी सधंै देश देशान्तरको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई, भौगोलिक परिवेशलाई कवितामार्फत चाखलाग्दो गरी तुन्दै पाठकको मन भुतुक्कै हुने गरी तान्छन् । घरी सैनिक जीवनको भोगाइ र प्रेमिल सम्बन्धका नालीबेलीलाई मर्मभेदन हुने गरी काव्यरुपी तीरले मुर्छित पार्छन् । यतिमात्र कहाँ हो र, देशको राजनीतिक वर्तमान अवस्था र सामाजिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको असहज स्थितिप्रति विमति जनाउँदै खबरदारी गर्ने हिम्मत जुटाएका छन् तीव्रव्यंग्य प्रहार गर्दै ।
प्रकृतिप्रेमी पर्यावरण संरक्षक हितान इको साहित्यको प्रणेता नै हुन् बेल्पाली साहित्यकारहरुमाझ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला जस्तो लाग्छ । ’बाग्मती ब्लूज’ सलल बग्नु पर्ने उनको प्रकृति अनुसार नै बगाउन सफल भएका छन् सर्जकले । विविध विषयमा रचना गर्दै कविताहरुलाई सरलता र तरलतापूर्वक मूर्तरुप दिने कोसिस राम्रो लाग्यो र कोसिसले निरन्तरता पाइरहोस् । हिमशिखर छिचोल्दै नेपालको छातीबाट बगेको बाग्मतीको अनन्त उन्मुक्त बगाईजस्तै बनोस् ’बाग्मती ब्लूज’को यात्रा नेपाली साहित्यको सागरमा । ’बाग्मती ब्लूज’ नवीन कृतिलाई, इको साहित्यलाई स्वागतम, स्वागतको तुल टाँगेर ! अनि मित्र विजयलाई लाख बधाई तथा अनेकन शुभकामना निरन्तरताको निम्ति !!!